Nbudata Douglas C-117D FSX & P3D - Rikoooo
Na-arụnyere onwe gị 10.5 ngwa ngwa
n'ihi na FSX-SP2 ma ọ bụ Acc & FSX Steam & P3Dv1 P3Dv2 P3Dv3 P3Dv4
Onye edemede: Usoro mods dabere na Jan Visser's (otu ọrụ DIGITAL DAKOTA) C-47 ngwugwu. Ụdị nyocha nke Manfred Jahn, textures site Gordon (gman) Madison na Nick Cooper, nyocha site Alan G. Ampolsk na Ralf Scholten. Nnyocha ihe omimi nke John D
Nke a standalone ngwugwu na-agbakwụnye usoro mmalite mmalite, nchịkọta aka-ngwakọta, mmekọrịta nyocha, VC chatter na panel 'Nyochaa' na VC re-textured. Ndị mods na-adabere na Jan Visser's (ọrụ DIGITAL DAKOTA) C-47 ngwugwu. Ekele maka ndị dere maka nnukwu ọrụ a.
Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme. Na akwụkwọ ntụziaka ụgbọelu, C-117D a kọwara dịka "ụgbọelu na-ajụ, ala ụgbọ elu dị ala maka iji dịka ihe dị iche iche, ọrụ, ma ọ bụ ụgbọ njem."
N'ịbụ nke e bu n'uche ka a gbanwere DC-3, Super 3 agbatịwo fuselage, engines ndị dị ike karị, ụda ụkwụ na-agbaghagharị, nke na-ebugharị uhie na-ebute nku, na nke na-ebuwanye ibu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ibu ụgwọ dị ukwuu karị na ọsọ ngwa ngwa na ogologo oge, o gosipụtara ọhụụ maka ọgbọ ọgbọ ọhụrụ dị ka Convair 240. Naanị ihe ndị Super 3s dị atọ na-ejikarị azụmaahịa na-arụ ọrụ n'ụlọnga nke Capital Airlines nke dabeere na Washington DC.
Otú ọ dị, otu narị US Navy na Marines Super 3s hụrụ ọrụ dị n'akụkụ ụwa nile n'okpuru aha R4D-8 (afọ ndị mbụ) na C-117D (1962 na-aga n'ihu). Aghapụrụ C-117D ikpeazụ agha site n'iji ya mee ihe na June 1982. Ndị Super 3 na-agbanyeghị ole na ole ka na-enwe nsogbu taa.